Epreli 2018 -IiRadiyo zenethiwekhi
Ikhaya / 2018 / UTshazimpuzi
Inyanga: April 2018
ezaposwa ngomhla Aprili 30, 2018
by UChris G7DDN
Esona sixhobo sam siphambili ukusukela oko ndangena kuyo yonke le nto yenethiwekhi yeRadio yeNethiwekhi ibiyi I-Talkpod N58.
Le ayisiyiyoyona radio ithandwayo ukusuka kwindawo yokuthengisa yokujonga- the I-Inrico T320 kubonakala ngathi ngumthengisi omkhulu ngoku (kwaye ewe ndinayo enye yazo, kwaye an Inrico TM-7!)
Kodwa ndinendawo ethambileyo yeTalkpod.
Okokuqala umgangatho wokwakha ngokuqinisekileyo yeyona nto ndiyibonileyo kuyo nayiphi na iRadiyo yeNethiwekhi ukuza kuthi ga ngoku. Ukuyithetha irhabaxa yinto nje engeyiyo - andikaze ndibenomathotholo onzima kangako!
Okwesibini, ukulungeleka kwesandla ngumzekelo- kanye njenge-HT ekufuneka ivakalelwe, ngokoluvo lwam.
Okwesithathu, iaudiyo kufuneka iviwe ukuze ikholelwe! Xa ndenza intetho kwiiRadiyo zeeNethiwekhi kutshanje kwiklabhu yasekhaya, iaudiyo evela kwiTalkpod encinci yagcwalisa igumbi elikhulu leklabhu ngokupheleleyo-kwaye kwakungekho nomthamo opheleleyo ngelo xesha. Ngaphandle akukholeleki!
Nangona kunjalo i-Talkpod yakhawuleziselwa ukuya kwintengiso esiphelweni se-2017, kwaye, njengoko kuhlala kunjalo kuyo nayiphi na into "yekhompyuter", i-firmware yayi "encinci" ekumiliseni.
Ndingayixolela inguqulelo yakudala ye-Android kunye nememori encinci njengoko ingachaphazeli ukusetyenziswa kwam ngonomathotholo. Kukho inala yememori yazo zonke iiapps endinokuzifuna kwaye zisebenza njengoko kulindelwe phantsi kwe-Android KitKat. Andifuni okanye ndisebenzise iSIM khadi yesibini okanye ikhadi le-SD.
Izinto endinengxaki nazo ubukhulu becala zazingathandeki, iwotshi enika ingxelo ngexesha elingalunganga ngaphandle kokuba ndenze kwakhona. Ipesenti yebhetri isithi i-1% xa bendisazi ukuba ayinakwenzeka! Andazi ukuba kwenzeka ntoni xa ndandicinga ukuba ndiyicimile irediyo. Ukucaphukisa izinto kunemicimbi ephazamisa ukusetyenziswa koonomathotholo.
Yokuphela ezinkulu Umcimbi yayikukulawula ivolumu, nangona yayikhwaza ngokuqinisekileyo, ngamanye amaxesha yayingakwazi ukuya ezantsi ngokwaneleyo ukuze isetyenziswe “ngokufihlakeleyo”.
Ewe ngoku ndine "radio entsha"!
I-Talkpod inayo, kwiintsuku nje ezimbalwa ezidlulileyo, ikhuphe ifayile ye- I-firmware entsha (EU) kunye I-firmware entsha (I-US) ebonakala ngathi ijongana nezo zininzi.
Ukulunga ngokupheleleyo, iTalkpod ikhuphe ii-firmwares ezimbalwa ukusukela ngoJanuwari kodwa eyakamuva ibonakala ijongana nemicimbi engaphezulu kunangaphambili.
Ke yintoni entsha?
Kulungile uninzi lwezinto ezintsha kungenzeka ukuba ziphantsi kohlaziyo, kodwa kukho izinto ezimbalwa ezibonakalayo (ezivakalayo?) Umahluko.
Awunakho Bonise Ipesenti yebhetri ngoku, yeyiphi enye indlela yokusombulula loo ngxaki- mhlawumbi ipesenti yemitha echanekileyo iya kwenza imbuyekezo kwixesha elizayo?
Xa ucima iyunithi ngoku, endaweni yokuya kwimowudi yenqwelomoya ngaphandle kokukuxelela, ikunika ukhetho oluluncedo kakhulu lokuba ungene kwimowudi yenqwelomoya okanye ucime amandla endaweni yoko, eluncedo kakhulu kwaye isebenziseka lula.
Ulawulo lwevolumu luphuculwe kakhulu, nangona isenokwenza nolawulo oluncinci kwimiqulu esezantsi endiyithandayo. Nangona kunjalo, oko kunokuba "kulungiswe" kwimenyu yobunjineli, njengoko kuchaziwe kule webhusayithi- nangona amaxabiso anikwe kweli nqaku ngokuqinisekileyo kufanelekile ukuzama ngawo (kwinyani yesiko likaHam!)
Ingcebiso eluncedo nayo yokusebenzisa ingxelo ehlawulelweyo yesoftware yamaqhosha ukulawula ivolumu yemithombo yeendaba. I-Android ibonakala ngathi ine-3 okanye i-4 yokulawula ivolumu eyahlukeneyo, inye kuphela eyeyomthamo wendabuko njengonomathotholo- Iqhosha Mapper lindivumela ukuba ndihlale ndisebenzisa ulawulo lwevolumu "iMedia" kwimephu yeqhina elibonakalayo.
Lilonke, ndisayithanda iTalkpod yam - ngokuqinisekileyo akukho lula ukuyisebenzisa njengefowuni njengezinye iiNethiwekhi zeeRadiyo, njengoko ingenayo iphedi (nangona isasebenza ngescreen sokuchukumisa), kodwa kwimeko yam yokusebenzisa, efana I-Radio efana ne-HT, ilungile!
Ayizukushiya ityotyombe lam ixesha elide. Nalu olunye “unomathotholo omtsha” ngenyanga okanye ezimbini. Ndiyathemba ukuba umamele, iTalkpod!
UChris Rolinson G7DDN
© Epreli 2018
ezaposwa ngomhla Aprili 29, 2018
Isaphulelo se-10% kuzo zonke iiradiyo ze-PTT4U
Unxibelelwano lweRadiyo ye-2-Way ngaphandle komda wobubanzi. Leyo yi-PTT4U.
Sebenzisa ikhowudi IXESHA10 xa uphuma ukufumana isaphulelo kwangoko Nawuphi na unomathotholo, kubandakanya kwifayile ye- Ukuhambisa iSoftware. Ukunyusa kuphela nge-31 kaMeyi.
Isaphulelo asisebenzi kwimirhumo.
ezaposwa ngomhla Aprili 25, 2018 Aprili 26, 2018
Yintoni eyenza iRadio Amateur?
Ndibe nencoko emnandi nomnye wabahlobo bam abasenyongweni bakaHam ngenye imini - kwaye yandenza ndacinga kwakhona… (ihlala iyinto eyingozi!)
Ayisiyo iRadio kaHam!
Sasixoxa ngenye yeendawo ezinkulu zokuthetha malunga neeRadiyo zeNethiwekhi; Ingxaki kubonakala ngathi inika abanye abantu ukuba abayivelisi i-RF kwiiBhendi ze-Amateur ngokwabo.
Umhlobo wam wayephikisa ukuba ukusebenzisa iRadiyo yeNethiwekhi yayingeyiyo iRadio yeAmateur, nangona xa wayethetha ngezixhobo ezingena kwi-IRN kunye nemiqondiso ephuma kwii-RF amakhonkco nge-Echolink, wayevuya ukuvuma ukuba inokuba yiHam Radio, ubuncinci inxenye , kuba ilizwi lomntu liza kuphuma, umzekelo, umntu ophindaphindayo kwindawo ethile.
Kwakhe nangona kunjalo, i-IRN kwi-IRN okanye uZello kuZello ngokuqinisekileyo "hayi Ham Radio ”kuba akukho RF kwi-Amateur Band eyenziweyo.
Ndiyifumene ngokupheleleyo le mpikiswano - akunakwenzeka ukuba ungavumi ukuba iiRadiyo zeNethiwekhi azivelisi ngokuthe ngqo "iHam RF" okanye zisebenze ngokuthe ngqo kwiibhendi zikaHam.
Kodwa ndicinga ukuba ayisiyiyo kuphela imbambano apha, njengoko ndiza kuza ngomzuzwana…
Awunguye Amateur ngaphandle kokuba… yintoni?
Uqhubekile uqhubeke kodwa wathi "awunguye uHam" ngaphandle kokuba uyinyani ukuhambisa kwiiBhendi zikaHam.
Ukuqiqa kwakhe yayikukuba ukuba usebenzisa i-CB, uyi "CB-er" kwaye ukuba usebenzisa uZello, uyi "Zello-er" kwaye akukho nanye kwezi eyenza nayiphi na ifom yeRadio ye-Amateur.
Kwakhona ndiyayiqonda ngokupheleleyo le nto, kodwa kwakhona kum ayibambeki ngokupheleleyo.
Masibone ukuba kutheni ndicinga ukuba izinto zitshintshile.
Uninzi lwembali yeRadiyo kaHam, bekucacile ukuba iiHams zisebenzisa kuphela iibhendi ezabelwe umbane wombane. Oku bekuyinxalenye kuba sinikwe oorhulumente ngeenjongo zovavanyo kwaye, ngokunyanisekileyo, kuphela kwento eyayikho!
Into enomdla kukuba, uninzi lwee-hams ngembali khange zibenomdla wokusebenza kwaphela-owona mdla wabo uphambili kunokuba kukuyilwa kwesekethe kunye / okanye ulwakhiwo.
Baye beza kuphela emoyeni xa bevavanya into ebandakanyekayo ukuba ukuhambisa kunye nokukhethwa kwebhendi kusenokwenzeka ukuba kwakungathethi nto kubo. Banokubakho naphi na kwi-Shortwave Spectrum ngenyaniso, kodwa kuye kwafuneka babambelele kulwabiwo lwamaBham, ngenxa yezizathu ezicacileyo.
Abanye basenokuba bayile kuyilo lwe-eriyali- kwaye kwakhona beza kuphela kwiibhendi ze-Amateur ukuqhuba iimvavanyo ezifanelekileyo zasemoyeni.
Kodwa ndiyathandabuza ukuba ngaba kukho naba bantu bazithandayo abazijonganga njengoHams de babe bona idluliselwe I-RF…
Kwaye kuthekani ngeempawu zokufowuna?
Iimpawu zethu zokufowuna ziyinxalenye yesazisi sethu njengeHams.
Endaweni yokungaqheleki, ndizibona ndinguG7DDN nokuba ndiyahlamba, ndiqhuba imoto yam, okanye ndikwiholide- phantse "ndiyinxalenye yento endiyiyo". Kuyamangalisa ukuba urhulumente abelwe isazisi anokuba nesiphumo kuthi!
Ukwenza izinto zibe mbi ngakumbi, ndikwabizwa ngokuba ngu "DDN" ngabahlobo bam kunye namalungu eklabhu - ndibiza amanye amalungu eklabhu ngezimamva zawo! Nokuba umhlobo wam ophikisanayo ngentla ubiza bonke abahlobo bakhe (zininzi kakhulu iiHams!) Zizimamva zabo.
Ngoba? Kungenxa yokuba ukuzazisa kwethu njengabantu, ngokuyinxenye kusongelwe kwiifowuni zethu zokufowuna, kwanaxa singekho "ngokukodwa kwiRF engahlawulwayo".
Ngoku oku kunomdla xa i-Intanethi ifika kwindawo yeHam kwiminyaka ye-1990.
Ngesiquphe sinendlela entsha yokusasaza kunye nemvuselelo, emva kweminyaka emininzi, kwaigama elithi "wireless". Kodwa oku akuphelelanga kwi-Hams kwakhona.
Nabani na angayisebenzisa le radio emfutshane engenazingcingo - nabani na angafikelela kwi-intanethi - nabani na angaba noo “Dibana” nohlobo lwe-DX- yiyo loo nto ingxaki yokuzithemba iHam Radio ibisokola kangangeminyaka ethile…
Ngaba oko kuthetha ukuba nangona ukuthanda iZello kunye ne-IRN "kungasebenzi"?
Ngaba oko kuthetha ukuba uHams kufanelekile hayi Sebenzisa ezi zixhobo usebenzisa iifowuni zabo, kuba asihambisi kwiqela elithile le-Amateur, umzekelo?
Ngendandicinga ukuba kuxhomekeke us njenge-hams nganye yokuthatha isigqibo we ufuna ukusebenzisa iindlela ezintsha zokusasaza nge-Intanethi.
Njengoko ndicacisile kwinqaku lam lakutshanje, "Ukuthatha ikhefu", Kwiklabhu yam yasekhaya, simisele ijelo leZello. Yimfihlo, iphasiwedi ikhuselwe kwaye imodareyithiwe. Kodwa isetyenziswa njengaso nasiphi na isitishi seRadio yeHam eneenkqubo ezichanekileyo ze-Amateur njl.
Xa isetyenziselwa iiRadiyo zeNethiwekhi (iikhompyuter ze-SDR eziphathwayo ezinamaqhosha e-PTT), kungekudala ngaphambi kokuba "izive" njengeHam Radio ngandlela zonke.
Buza umntu okhe wasebenzisa enye ngalo naliphi na ubude bexesha… amaqhosha e-PTT akwiziphatho ezisusa imvakalelo yokusebenzisa isixhobo se-Android; Iinqununu ze-chunky entendeni yomntu zifana nezinye ii-HT; Uhlobo lwe-PTT-comms isusa nayiphi na intsalela yokuziva ngathi "ngumnxeba", kodwa sifumana izibonelelo zomsindo ocacileyo wekristale kunye nezibonelelo zemithombo yeendaba zangoku, ezinje nge-ID yamalungu, (ilungele ukwazi abantu!) ukubanakho ukuphindaphinda “ii-overs”, ukubanakho ukumodareyitha kunye nokuzimela ngokwakho ngamapolisa ngeendlela ezifanelekileyo.
Ngaba iZello Group yethu “Ham Radio”? Ukuba uyichaza KUPHELA ngokuvelisa i-RF kwiBhendi ye-Amateur, hayi hayi. Kodwa ngokuqinisekileyo uvakalelwa yithande…
Ngaba ikhona enye inkcazo?
Kwinkulungwane yama-21, ivelisa i "Amateur RF" kuphela indlela yokuchaza iRadio kaHam? Kwiminyaka engama-50 eyadlulayo lo isenokuba ngumbuzo olula ukuwuphendula- ngoku, andiqinisekanga kangako…
Iifom zendalo zokuSasazeka zivulelekile kuphela kwiiNdawo zeHam zemveli kunye noonomathotholo - ngokulinganayo iindlela ezintsha zokusasaza kwi-Intanethi zivuleleke kuphela "kwiirediyo" ezisekwe kwikhompyuter. Ngaba ayisiyomeko nje yokuba "amahashe ngezifundo"? Sebenzisa izixhobo ezifanelekileyo ozama ukufikelela kuzo?
Inyani yokuba i-Hams idlala ngokunqumla phakathi kwezi zixhobo kunye neefom zosasazo inomdla ngakumbi!
I-D-STAR kunye nezinye iindlela ziyinxalenye yolu vavanyo ukusukela oko iiradiyo zorhwebo zokuqala zedijithali zaphuma ngasekupheleni kweminyaka yoo-1990.
Kwaye kuphela kukuzonwabisa!
Igama elithi Amateur livela kwisiLatin "Amare" - ukuthanda.
Ngamanye amagama, nantoni na engahlawulwayo yenzelwa uthando lwayo. Irediyo ye-Amateur yinto esizonwabisa ngayo nesibandakanyekayo nayo (ngethemba!) Kuba SITHANDA irediyo zonke Iifom zayo.
Kodwa iZello (kunye ne-IRN) ikwaluhlobo lukanomathotholo.
Ewe inokusebenzisa i-5GHz okanye i-900MHz, ngenene asinokwazi ngokuthe ngqo ukuba zeziphi ii-frequency esizisebenzisayo nangaliphi na ixesha, kodwa i-RF is iyenziwa. (Ndicinga ukusebenzisa isixhobo esingenazingcingo kunjalo!)
Beka enye indlela, ukuba ndinencoko yemizuzu eli-10 kunye nomnye uHam eZello, kwaye ndiyaphinda le ncoko Isenzi enye iseti yemizuzu eli-10 kwiimitha ezi-2, kutheni le nto enye kufanele ukuba ithathwa njenge "fanelekileyo "kwaye enye ingangqinwa?
Ukuba kuphela kwento eyiqinisekisayo kukuba ikwiimitha ezi-2, ndicinga ukuba kufuneka sibuze ukuba asiqali "ukwahlula iinwele".
Itekhnoloji ebangele iingxaki- zange saze sajongana nemibuzo enje ngaphambili.
I-CB kunye ne-446MHz zahluke kakhulu kwiRadio kaHam, kodwa ukufika kwetekhnoloji entsha yeyona nto ibangela ukuba kubuzwe imibuzo emitsha (phantse yefilosofi) malunga nokuzonwabisa kwethu nalapho ubuchwepheshe busisa khona.
Ukuba ufunda amanqaku am rhoqo, uyazi ukuba ndicinga ukuba ayisiyonto imbi leyo.
Ngaba ukuhlala unengqondo evulekileyo kuyinto elungileyo? Ingqondo evaliweyo mhlawumbi ingaphantsi?
Kodwa ndiyamthanda uHam Radio!
Ndiyavuma! Mna uthando I-radio kaHam kuzo zonke iifom zayo - iZello / IRN kum yenye "ifom" yeHam Radio, mhlawumbi ingekho kwiqela elithile likaHam elinikezelwe nguRhulumente, kodwa kuzo zonke iinjongo kunye nenjongo, uvakalelwa yithande.
Ngokuqinisekileyo andizukuya kwi-pooh-pooh - kuba ithumela inani elithile lemijikelezo ngomzuzwana kwindawo yendawo endikuyo. Ndiyakuthanda ukufunda indlela unomathotholo osebenza ngayo kunye nokwakha izinto, kodwa kutheni le nto kufuneka indiyeke ndinxibelelane nabahlobo bam bakaHam kwaye ndisebenzise iiprothokholi zikaHam, nge-2.4 GHz Wifi xa kukho imfuneko?
Xa ndisebenzisa iZello kunye ne-IRN, ndisese "G7DDN" kwaye ndisebenzisa iiprothokholi zikaHam ngokufanelekileyo. Andiyi baye ukuba mhlawumbi, kodwa ndiyayenza, ngakumbi iqela lethu leklabhu yeZello inemithetho eyikhulise ekhaya ukuba ithi masenze njalo.
Kwakulula kakhulu ngaphandle kwe-Intanethi!
Amabhanti kaHam yayingamaqela kaHam, amaqela osasazo ayesasaza amaqela, izitishi zamanani zazizikhululo zamanani kwaye iijammers zazingamajammers.
Ngoku i-intanethi ifikile yonakalisa yonke into ngokwenza ukuba amava erediyo afumaneke wonke, Usasazo lwerediyo, unomathotholo woHlola, unomathotholo weShishini, unomathotholo weenkonzo ezingxamisekileyo, irediyo ye-Hobby 2-way kwaye ngoku “usulelekile” kwiRadio yeHam. 🙂
Akunyanzelekanga ukuba sivumele ubuchwephesha obutsha buyekeze nangona. Sisenokuma kwaye sisebenzise i-radio eyi "Ham" eyiyo kwaye kwangaxeshanye samkele iiRadiyo zeNethiwekhi.
Singathi, "Kulungile oku akuyiyo ngqo i-Ham RF kodwa yinto esinokusebenza ngayo kwaye siyisebenzisele iinjongo zethu."
Mhlawumbi eyona quirk imangalisayo kukuba, ukuba i-Intanethi ibikhona ngexa i-Amateur Radio iqala, ndiyazibuza ukuba ingaba umhlobo wam osenyongweni kaHam kwaye ngekhe ndibenengxoxo enjalo namhlanje!
ezaposwa ngomhla Aprili 16, 2018 Aprili 16, 2018
Sebenzisa ii-SIM khadi ze-4G kuphela kwi-3G-kuphela iiRadiyo zenethiwekhi
Ezinye ii-SIM khadi ze-4G aziyi kuxhasa iiradiyo ze-3G kuphela. Ukuba kunjalo, usebenzisa iqhinga elincinci, unokwenza irediyo ye-Android icinge ukuba yi-4G kwaye uyivumele isebenzise i-3G, isebenzisa i-SIM eyi-4G kuphela.
Nantsi inkqubo yamanyathelo ama-4:
1 - Cofa * # * # 3646633 # * # * (Oku kuyakungena kwimenyu yeenjineli)
2 -Ngoku, khetha Ukhetho lwenethiwekhi olukhethiweyo
3 -Kuluhlu olwehlayo, kufuneka ukhethe 4G LTE / WCDMA / GSM. Emva koko, gcina kwaye uqalise kwakhona unomathotholo.
4 -Ukwenziwe, faka nje i-4G SIM kwindawo yokuqala yeSIM kwaye unokugcina indawo yesibini yeSIM engenanto.
Isixhobo sakho ngoku siza kusebenza kwisantya se-3G, esixhumeke kwinethiwekhi ye-3G kodwa sisebenzisa i-SIM khadi ye-4G kuphela.
ezaposwa ngomhla Aprili 6, 2018 Aprili 6, 2018
Kube mnandi ukuba neentsuku ezimbalwa kude noxinzelelo lomsebenzi wosuku ngexesha lePasika.
Umfazi wam kwaye sichithe ixesha elithile eWales kwaye senza ezimbalwa kwezo zinto sonke esithanda ukuzenza xa sikude nekhaya. Sasikunandipha ngokukhethekileyo ukuhamba kancinci nokuhamba sijikeleza iinduli ezintle neentaba.
Itekhnoloji kunye nobomi bale mihla
Oku kubandakanya ukusebenzisa imephu yekhosi, ngakumbi ukujikeleza ezinye zeendlela ezincinci zeentaba.
Kulapho ke kwakhona, into endicinga ukuba ndingayibiza ngokuba "ziingxaki" zobomi bale mihla, ngendlela efanayo kwiindlela endibabona zichaphazela umdlalo wethu weHam Radio, waphakama ukuze ndiqale ukucinga kwakhona…
Kulungile, ndithathe i-Ordnance Survey yam entsha (I-Arhente yeMephu yase-UK) yemephu yendawo kwaye ndafumanisa ukuba ndikhunjuzwa ngento entsha, njengoko ndibhengeziwe kwiphepha elingaphambili…
Ewe ewe, kuba ndiyithengile imephu yamaphepha, ndikulungele ukukhutshelwa simahla kwemephu yamaphepha ye-iPad kunye ne-iPhone yam! Yay!
Bendihlala "ndiyimephu yamaphepha" uhlobo lomntu, kodwa ndiyazithanda izicelo zokwenza imephu kwizixhobo zam zekhompyuter, ndiye ndacinga ukuba le iyakuba yinto elungileyo- kwaye ke ibiyiyo!
Izithuba kunye nezinto ezingalunganga
Kwakufana neyona nto ibalaseleyo kwihlabathi liphela elinemephu yamaphepha kanye njengakwiphepha kodwa kwithebhulethi yam endaweni yoko ...
Ndikuthandile ukukwazi ukusondeza kwimephu ngaphandle kokufuna iiglasi zam zokufunda…
Ukuma kwam kuchazwe kwimaphu ngalo lonke ixesha ngeGPS kwakumnandi…
Ukwazi ukuba imephu izakuhlaziywa ngokuzenzekelayo inempawu ezintsha zejografi, ezinje ngokudlula ngendlela kunye neendlela ibikukuqinisekisa ubungqina bexesha elizayo…
Eyona nto ipholileyo kukuba bendingenakufumana ukujonga ngokubanzi indawo yam nakweyiphi na inkcukacha njengoko ndinakho ngemephu yam yamaphepha evuliweyo- Boo…
Ndonwabile ndicinga ukuba ndiyazi ukuba imephu yam yephepha ayinakuze iphele ibhetri!
Kwaye xa ilanga liphumile, ucinga ukuba leliphi elalifunda lula?
Kodwa ngokubanzi, ukongezwa okutsha ngamava amnandi kwaye kwandikhokelela ekubeni ndikholelwe ukuba ndiya kuhlala ndifuna ukuba kunye zombini Iinguqulelo zemephu xa bendiphumile kwaye ngekamva, ngenxa yokuba inguqulelo ye-iPad wongezelela Into enamava endandisele ndiqhelene kakhulu nayo.
Ngoku inantoni yokwenza neeRadiyo zenethiwekhi?
Omnye umzekelo wendlela itekhnoloji eyenze ngayo imeko yobomi bethu kwiXesha lama-21. IiRadiyo zenethiwekhi, kum, zifana nemephu ekwi-Intanethi- isihlanganisi esongeza into kumava apheleleyo, kodwa sinokuzimela sodwa.
Ndiyazithanda iimephu zamaphepha, ndihlala ndinayo, ndihlala ndihlala ndiyithanda iRF Ham Radio, ndihlala ndinayo, ndihlala ndihlala njalo.
Kodwa ngoku ndiyathanda ukuba nemephu yam ye-iPad nayo - njengokuba ndiyakuthanda ukusebenzisa iiRadiyo zenethiwekhi njengenxalenye yeholide yam yerediyo.
Zombini zisebenzisa itekhnoloji entsha ukuphucula izinto endizithandayo.
Kodwa KUFUNEKA ukuba ibe yimephu yamaphepha kuphela, ngokuqinisekileyo?
Iya kuba bubudenge ukulandela umbono wokuba, ngaphandle kokuba mna rhoqo Sebenzisa imephu yephepha, endingahambi kuyo “ngokuchanekileyo”!
Ngokulinganayo, andiyithathi imbono yokuba, ukuba ndisebenzisa i-RF, ngokuqinisekileyo kufanele ukuba ikwibhendi ethile ekufuneka ndibenayo fun ukuyisebenzisa.
Mhlawumbi ingxaki ilele kwinto yokuba zonke ezi zinto zokuzonwabisa zichanekile kanye, zizinto zokuzonwabisa. Izinto ezenzelwe ukusizisa yolonwabo.
Ewe ezinye izinto zokuzonwabisa zifuna iilayisensi ezivela kumaqumrhu asemthethweni ukuze zisebenze; ukudubula, ukuqhuba (ngokuqinisekileyo kwiintlobo ezithile zezithuthi), ukuhamba ngenqwelomoya kunye neendlela ezithile zerediyo.
Kodwa ke eyona nto inkulu ethe itekhnoloji yenziwe kwi-21st Century kukusinika ngaphezulu Kukhetha malunga njani ukulandela izinto esizithandayo.
Imephu ekwi-intanethi indenzela oko xa uzulazula, kanye njengokuba iRadio yeNetwork isenza kwinto endithandayo.
Kwaye oku kunokwenzeka ukuba yinto enkulu eyonwabisa umdlalo wethu weHam Radio.
Ufuna ukuba yintoni oyithandayo?
Uyabona, ngoku sinobuchwephesha bokwenza iRadio ibe yinto oyithandayo we ndifuna ukuba yenzelwe ngokwethu. Singayilungisa ukuba ibe yintoni we Ndifuna ukuba njalo kwaye ndenzele us.
Oko kuthetha ukuba singasukela i-DX nge-20m ukuba siyafuna; singathatha inxaxheba kukhuphiswano lweeyure ezingama-48 ukuba siyafuna; kodwa singasebenzisa i-IRN kuluntu ngokwakha uluntu ngonomathotholo, ngokungathi iqela le-DigiCommCafé IRN elisandula ukusekwa lizama ukwenza, kwakhona ukuba siyafuna.
Ayilulo uhlobo olunye lweRadio oluthabathel 'indawo olunye, kukuba bona ncedisa omnye komnye, kunokuba imephu ekwi-intanethi izalise iphepha elinye.
Iklabhu yerediyo yasekhaya ineqela labucala leZello - ngamalungu ahlawulelweyo kuphela angazibandakanya nayo, kodwa imigaqo esigqibe kuso, kukuba kufuneka sisebenzise iiprothokholi zikaHam. Imodareyithiwe kwaye kwinqanaba elithile ilawulwa. Unokuthi asingobasebenzisi kuphela kodwa silingana negunya lokufumana ilayisensi! Yindlela we ndifuna ukuba isebenze.
Amalungu angenaphepha-mvume anokuba nayo "iklabhu yokufowuna", ayisebenzisayo ade afumane umnxeba kaHam. Banokuziqhelanisa nokusebenzisa iRadio kaHam ngokukhuselekileyo kwindawo abaphakathi kwabahlobo kwaye banokwenza iimpazamo ngaphandle kokuchaphazela ezinye iiHams.
Ewe kuvaliwe, ewe kungasese, kodwa kuyonwabisa ukusebenzisa imiba YeHam Radio ngendlela eyahlukileyo-enye leyo we Ndifuna ukusebenzisa kwaye ndisebenzele us.
Kuyinto entle darned ethandwayo kakhulu!
Ukongeza ngaphezulu kancinci, akufuneki sinyanzelwe yimigaqo nemigaqo ebibalulekile xa umdlalo ubusenzeka.
IiRadiyo zenethiwekhi zisebenzisa ukusasazwa kwe-Intanethi, hayi ukusasazeka kwe-Ionospheric- abayifuni ilayisensi kuba i-Intanethi ivulelekile kubo bonke. (Ukuhambisa amaza amafutshane ewe, sebenzisa i-Ionospheric Propagation kwaye ufuna ilayisensi njengoko abasebenzisi kufuneka baqonde iziphumo zokumiliselwa kweendlela ze-RF emoyeni)
Kodwa sisenokonwaba ngezi zixhobo kwaye ziya zisanda iihams ezenzayo.
Abanye basebenzisa nje ukuphela-ukuya-ekupheleni; abanye bazisebenzisa njengenxalenye ye-Ham-band kwikhonkco le-Intanethi; abanye bade bazisebenzise ukulawula ukude kunye ne-PTT ii-transceivers zabo ezikude ze-HF.
Nokuba yeyiphi na indlela, iiRadiyo zeNethiwekhi zibonakala zisiba sisixhobo esiluncedo kakhulu kubathandi berediyo bayo yonke imvelaphi.
Kulula kakhulu ukunkqonkqoza okanye ukuzichitha ngokuqinisekileyo- kodwa mhlawumbi umntu kufuneka azame isixhobo esinjalo kuqala, ngaphambi kokuba wenze njalo?
Ungothuka kamnandi kukwenza ngcono kwabo ukuzonwabisa kwethu.
Imephu ekwi-Intanethi nabani na?
© UChris G7DDN -U-Epreli 2018
ezaposwa ngomhla Aprili 5, 2018 Ngamana 3, 2018
Uyonyusa njani inzuzo yemic kwi-Inrico TM-8
Oku kuyaziphucula ezinye iingxelo zokumamela imakrofoni engalunganga ye-Inrico TM-8
Ukuphucula irediyo nge le firmware kwaye ulandele le miyalelo. Iya kususa nengxolo "yeengxangxasi". Emva koko, unokonyusa inzuzo enje:
Yiya "kwifowuni" usetyenziso kwaye ucofe: * # * # 3646633 # * # *
Oku kuyakungena kwiMenyu yeNjineli
Emva koko tyibilika ibha ephezulu kwi "Hardware Testing"
Yiya kwiAudio, Indlela yesiqhelo kwaye utshintshe udidi lube yi- “Mic”
Khetha iNqanaba 4 kwaye uhlengahlengise ixabiso ukuya kuma-255 emva koko ucofe ku "set".
Oku kusebenze kum. Ezinye ii-audiophile zathi emva kokufaka endaweni yemakrofoni i-electret capsule iziphumo zazingcono.